कोरोना संक्रमण भए–नभएको अब कुकुरले पत्ता लगाउने , पीसीआर टेस्ट भन्दा प्रभावकारी - News 88 Post
एजेन्सी । एक खास नश्लको कुकुरले सुँघेरै कोरोना संक्रमण भए–नभएको पत्ता लगाउन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ।
ल्याब्रडोर जातको तालिमप्राप्त कुकुरले गरेको कोरोना परीक्षण नतिजा पिसिआर वा एन्टिजेनभन्दा प्रभावकारी पाइएको छ। विभिन्न देशको प्रारम्भिक अध्ययनबाट यस्तो निष्कर्ष निस्केको अमेरिकी अखबार ‘द न्यूयोर्क टाइम्स’ ले जनाएको छ।
बैंककमा कोरोना परीक्षण गर्न बबी, ब्राभो, एन्जेल, एपोलो, टाइगर र नासा नामका छवटा ल्याब्रडोर कुकुरलाई तालिम दिइँदैछ। यी छवटै कुकुरले एउटै समूहमा रहेर काम गर्दैछन्।
यी कुकुरलाई छ जना प्रशिक्षकले छुट्टाछुट्टै तालिम दिएका थिए। यसका लागि संक्रमित व्यक्तिको काखी वा उसले लगाएको मोजाको पसिनाले थोरै कपास भिजाइन्छ। त्यसपछि त्यो कपास डल्लो पारेर कुकुरलाई सुँघाइन्छ। कोरोना लागेका व्यक्तिको जीउको विशेष गन्ध कुकुरले चाल पाउँछ। त्यही गन्ध पछ्याउँदै अरू संक्रमित पत्ता लगाउन सक्छ।
एकमहिने तालिम क्रममा ती कुकुरलाई दिनको झन्डै ६ सय जना व्यक्तिको पसिना सुँघाइन्थ्यो। यसरी सुँघेपछि कोभिड भाइरसको गन्ध भेटिएको संकेत दिन कुकुर चुप्प लागेर बस्थ्यो। अरू बेला विशेष तरिकाले संकेत दिन्थ्यो।
‘पिसिआर परीक्षणले तुरुन्तै नतिजा दिँदैन। भर्खरै संक्रमण भएको व्यक्तिमा त यस्तो परीक्षणले गलत नतिजा दिने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ,’ अस्ट्रेलियाको एडलेड विश्वविद्यालयका भेटेरिनरी विशेषज्ञ डा. एने–लिसे चेबरलाई उद्धृत गर्दै न्यूयोर्क टाइम्स लेख्छ, ‘कुकुरहरूले भने संक्रमण भएको सुरूआती दिनमै भाइरसको गन्ध पत्ता लगाउँछन्।’
डा. चेबर छ महिनादेखि कुकुरबाट कोरोना परीक्षण गर्ने अनुसन्धानमा संलग्न छन्।
उडिरहेको विमानमा जब यात्रु बेहोस भए …. एयरहोस्टेसले हम्किए, पानी छम्किए
माधव नेपालले नयाँ पार्टी खोल्ने, हुँदैछ घाेषणाकाे भव्य तयारी